शनिबार बिहानै थप ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५ सय ४८ पुग्याे — Sanchar Kendra
शनिबार बिहानै थप ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५ सय ४८ पुग्याे
काठमाडौं । शनिबार विहान थप ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कपिलवस्तु, सर्लाही, रुपन्देही, काठमाडौंलगायतका जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन् । योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ५ सय ४८ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्लाहीको गोडैता र कविलासी नगरपालिकामा १३ जना संक्रमित भेटिएका छन् । त्यस्तै कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकामा ८ जना संक्रमित भेटिएका छन् । रुपन्देहीमा ८ जना, बारा, चितवन र काठमाडौं जिल्लामा पनि एक एक जना संक्रमित भेटिएका मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित सबै ७ जना मन्त्रीको कोरोना पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी गरी १ सय ४६ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए ।
बुधबार संकलन गरिएको प्रदेश सभामुख, सांसदहरु, अन्य सचिवालय कर्मचारी, पिए र चालकसहित १ सय १४ जनाको रिपोर्ट भने नआइसकेको निर्देशक शर्माले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीगायतका मंगलबार संकलन गरिएका स्वाब नतिजा शुक्रबार निकाल्यौं । बुधबार संकलन गरिएका स्वाबको नतिजा आज (शनिबार) आउँछ,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको स्वाब भने अहिले परीक्षण नगरिने डा. शर्माले जानकारी दिए । ‘उहाँ काठमाडौं जाँदै हुनुुहुन्छ । २०÷२१ गतेमात्रै सदनमा उपस्थित हुने भएपछि अहिले परीक्षण गर्न आवश्यक नभएको हो,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेश बजेट अधिवेशनका लागि मंगलबार र बुधबार गरी प्रदेशका मन्त्री, सचिवालय कर्मचारी, सांसद, सुरक्षाकर्मी, सांसदका पिए गरी २ सय ६० जनाको नमुना स्वाब संकलन गरिएको थियो । अघिल्लो पटक विभिन्न कारणले स्वाब संकलनमा छुटेका प्रदेश सांसद, प्रदेश सभा सचिवलयका कर्मचारी गरी ४७ जनाको स्वाब शुक्रबार पुनः संकलन गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
आइतबारदेखि सुरु हुने गण्डकी बजेट अधिवेशन बैठकका लागि उनीहरुको स्वाब संकलन गरिएको हो । अघिल्ला वर्ष हुँदै आएको प्रदेश सभा भवनमा ठाउँ अभावले गर्दा यस वर्ष पोखरा सभागृह हलमा अधिवेशन हुन लागेको हो । करिब १३ सय सिट क्षमता भएको हलमा ६० जना सांसदले ‘सामाजिक दूरी’ कायम गर्दै बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।